> Resource > Beddelaan > Sida loo Beddelaan DV in AVI
Maalmahan, kaamirada digital ama rikoorrada ayaa qaar badan oo ka caan ah oo u noqday. Dadka u isticmaali doono si ay u qoraan videos xisbi, inta lagu jiro fasaxyada, iyo axada, celebrative, si ay u abuuraan filimada qoyska iyo Kiinteistö iyo wax ka badan. Si kastaba ha ahaatee, videos lagu duubay mar walba waa in qaab (format DV file) a video digital in aan si toos ah u ciyaaray kartaa qaar ka mid ah qalabka la qaadi karo ama ujeeddooyin la wadaago online. Si aad u hesho wax badan oo ka mid files DV aad, iyaga diinta qaab file AVI noqon lahayd doorasho wanaagsan. Sida aad ogtahay, AVI waxaa uu taageero ballaaran ee kala duwan oo badan ee hababka qalliinka iyo qalabka.
Fiiro gaar ah: Qaar ka mid ah rikoorrada video digital xogta ee qaab DV-AVI. Waa sida caadiga ah AVIs, sida caadiga ah ka badan oo ah meel aad gaari ku adag ee kor u qaadato sidii ay u isticmaalaan yar riixo. Si Radidiyaha kuwaas files ee qalabka la qaadi karo ama barnaamijyo kale, weli waxaad isticmaali karaan iyaga diinta qaab kasta oo aad rabto, si fudud oo dhaqso. Tutorial hoos ku qoran ayaa la diyaariyey si ay kuugu hagaan diinta on nidaamka hawlgalka Windows. Si kastaba ha ahaatee, waxa ay noqon doontaa mid aad u la mid ah xataa haddii aad tahay qofka iska leh kibirsan ee Mac.
Qeybta 1: Best DV in AVI Video Converter
Qeybta 2: DV Free in AVI Converter
Qeybta 3: DV Online in AVI Converter
Qeybta 4: Extended Knowlege u DV iyo AVI
Sidoo kale taageertaa AVCHD ayaa kordhin file iyo qaab kale oo la gelin.
Ogaashaha files si toos ah uga soo fiidiyo fur-ee.
Awood u leh in loogu badalo ilaa 30 jeer ka dhakhsi la waayi maayo tayada.
Socon for loo maqli karo ee qalabka ugu.
Sida loo badalo DV ah in AVI
Waxaad gabi ahaanba isku hallayn karo a video Converter lagu kalsoonaan karo oo dareen leh sida Video Converter Ultimate ee baahida diinta video aad. Waxaa qoreysa tayo sare leh, xawaaraha unparalled iyo sidoo kale wax soo saar socon ballaaran. Sidaa daraadeed, waxa aad bilaabi kartaa si loogu badalo faylasha DV in AVI oo aan wax tababar loo baahan yahay. Waxaa si dhab ah aad u user-friendly, xitaa bilowga ah.
1. files Upload DV
Riix dar Faylal ay ku darto files DV aad ka desktop ama fayl kale ku jiraan. Haddii kale. si fudud u jiidi-iyo-hoos u files DV si toos ah u gal barnaamijka. Haddii aad jeclaan doonaa inuu iyaga geeyo si ay u sameeyaan playlist video ah, fadlan sax ku milmaan oo dhan videos mid hoose ee interface ugu weyn.
2. Edit files isticmaalaya software la mid ah
Intii aanay video ah, oo aad taaban karo ilaa aad videos la feature tafatirka gundhig. Hawlaha The tafatirka heli karo waxay ku qoran yihiin hoos:
Delete weraro la rabin by falinjeeerka faylasha video.
Habee video adigoo codsanaya saamaynta.
Geli watermark iyo subtitles.
3. Dooro AVI ka horena u
Riix Qaabka Output in la furo liiska hoos-hoos qaabka. Dooro AVI ka Qaabka > Video . Haddii aad doonayso in aad Radidiyaha faylasha la gediyay on a PSP, Madaxweyne Siilaanyo, Blackberry, Zune ama iwm, waxaad dooran kartaa presets filaayo in ka Device si toos ah category. Waa sahlan badan isagoo cilmi waxa goobaha ugu wanaagsan ee qalabka la qaadi karo gaar ah.
Marka aad ku faraxsan yahay la, kaliya ka dhacay Beddelaan ka furmkidoona qaab beddelidda. Barnaamijkan wuxuu kaloo ku tusayaa waqtiga haray bar horumar ah si aad u qorshayn karto waxa aad samayn karto waqti la heli karo halkii ay ka eegaya PC.
# 1. Free Video Converter: Wondershare DV Free in AVI Converter
Kale oo ka duwan qaabka file DV, waxa kale oo aad u bedeli karaan noocyada kale file in AVI ama si fudud u doorato ka presets ee la heli karo.
Pro: Free inaad kala soo baxdo.
1. Keliya ku koobnayn falinjeeerka videos.
2. Ma aha suurto gal ah si ay u sameeyaan DVDs u gaar ah.
3. Speed ​​diinta ma aha sida ugu dhakhsaha badan Video Converter Ultimate ah.
Qeybta 4: Extended Aqoonta DV iyo Qaabka AVI
DV waa weel loo isticmaalaa in lagu kaydiyaa videos digital duubay kaamirada digital on. Xogta video ayaa inta badan Tifaftirayaasha in hab lossy kaydinta, halka ay tahay mid kasoo horjeeda dhamaystiran oo maqal ah ka uncompressed. AVI waa weel multimedia ay ku jiraan xogta audio iyo video labadaba. Waxa ay u ogolaataa audio-la-video loo maqli synchronous. Files AVI taageeraan badan audio geeyo iyo video
Windows Movie Kan sameeyey, Windows Media Player
Dadaal wadajir ah oo ay IEC iyo kuwa kale Microsoft
Macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan qaab file DV ah
Sida loo rogo ama MTS in AVI Macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan qaab file AVI ah
DV in DVD gubi: Sida loo Beddelaan MiniDV / DV in DVD